Nzukọ na Durres - Via Hotels
Elslọ nkwari akụ dị na Tirana
Elslọ nkwari akụ dị na Durres
Họtelu dị na Saranda
Ihe omume & Nzukọ
Nzukọ na Tirana
Nzukọ na Durres
Nzukọ na Saranda
Umunna na Tirana
Udo na Durres
Ahụike na Saranda
Na-enye na Tirana
Na-enye na Durres
Anyị nwere ogige maka emume gị niile!
Nwee obi ụtọ nabata gị na ezigbo ụlọ ọmalịcha Albania, ntụrụndụ, Villas na aparthotels.
Ebe Mgbakọ na Durres
Ọ bụrụ na-ịchọrọ inwe ọgbakọ na ọgbakọ gị na Albaniaban Durres, ị ga-ahọrọ nhọrọ zuru oke. Akụkọ ihe mere eme nke Durres dị jụụ na-agbatị afọ 406, ebe ọdịnala na ọdịbendị ọgbara ọhụrụ jikọtara n'ụzọ dị ụtọ. Obodo dị nso na ogige ndị mara mma ebe a na-enwekwa nnukwu etiti obodo.
Ebe Mgbakọ na ụlọ nzukọ na DURRES
Dị ka o kwesịrị, anyị nwere ọtụtụ ebe ọmụmụ ihe na ụlọ nzukọ na Durres nke na-eme ka ọ dịrị gị mfe izute. Anyị na-enye nzukọ na nnọkọ nha ọ bụla ma ị na-atụle maka iwulite ndị otu, igba egbe ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Anyị na - enyere gị aka ịchọta ebe ọgbakọ iji mee ka ogbako gị nwee ihe ịga nke ọma.
Hotelslọ nkwari akụ anyị na Durres
Hotel na Restauranlọ oriri na ọ Restauranụ Restauranụ
Hlọ nkwari akụ VH Belmondo bụ nhọrọ zuru oke maka azụmahịa gị na njem obi ụtọ gị na Albania n'ihi ọmarịcha ọnọdụ anyị dị n'akụkụ osimiri. Ha niile gosipụtara Wi-Fi ọsọ ọsọ, igwe ntụ oyi na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe.
VH PRIME Villa Pascucci bụ nhọrọ zuru oke maka azụmaahịa gị na njem njem okomoko na Albania maka ọmarịcha ọnọdụ anyị n'akụkụ osimiri. Na ụdị nke oge a, PRIME Villa Pascucci nwere ọnụ ụlọ 50 sara mbara nke emere maka nkasi obi nke ndị ọbịa anyị. Ha niile gosipụtara Wi-Fi ọsọ ọsọ, igwe ntụ oyi na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe.
VH Western Star Hotel nhọrọ zuru oke maka azụmaahịa gị na njem njem obi ụtọ na Albania maka ekele maka ọmarịcha ọnọdụ anyị dị n'akụkụ osimiri. Site na ụdị nke minimalist nke oge a, Western Star Hotel nwere ọnụ ụlọ sara mbara 30 emere maka nkasi obi nke ndị ọbịa anyị. Ha niile gosipụtara Wi-Fi ọsọ ọsọ, igwe ntụ oyi na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe.
Debanye aha maka inye onyinye naanị anyị
TYRANNE • EGO • Saranda
Ọnụ ego na ọnọdụ
Bụrụ onye ibe
Via Hotels © 2020. Edebere ikikere nile.